BBC Akademi | Afrikaan I Saldhiga xalka caqabadaha
Qaybtan waxaad ku baraneysaa sida loo diyaariyo warbixin qodobaysan, oo xoog iyo xaqiiqo leh. Waxaad u baahan tahay in aad gudbisid muhiimadda warka si caddaan ah oo kooban adiga oo isticmaalaya luqad sahlan oo dhageystayaashu wada fahmi karaan Waa in aad miisaan u yeesho eray kasta oo aad isticmaaleyso iyo micnahiisa. Maxaa loo baahan yahay? Warbixin qoridda-halka uu weriye sharraxaad ka bixinayo dhacdo, waqti gaaraya daqiiqad iyo 15 ilbiriqsi-waxay ka mid tahay qodobbada aasaasiga ah ee barnaamij kasta ee la xiriira war idaacadeed. Weriyaha BBC ee arrimaha diblomaasiyadda Jonathan Marcus, waxaa uu leeyahay marka hore go’aan ka gaar nooca dhambaalka …
Qaybtan waxaad ku baraneysaa sida loo qoro bandhigga sheekada raadiyaha (Cue), ee looga dhigo mid xiisa leh. Waa inaad ku darto faahfaahin kooban oo qof dhacada lu lug leh ka yiri. Sheekada waa inaaf fahamsan tahay oo si kooban aad u qorto bandhigga adiga oo aan bixin dhammaan xogta sheekada. Raadiyaha: Neil Churchman Iibi sheekada Wax walba oo aad samayso, yaysan kugu caajisin ama ha wareerin dhagaystayaasha. Sheekooyinka qaarkood waa fudud yihiin, oo leeyihiin soo jiidasho; qaar kale ayaa noqon kara kuwo aan xiiso lahayn oo adag. Shaqadaadu waxay tahay in aad ka dhigto bandhigga sheekada mid ay dhagaystayaashu u …
Haddaba marka aad gudbineysid fikrad, hasoo jeedin oo keliya sheeko – laakiin waxaa lagaa doonayaa in aad caddeyso waxa aad rabtid inaad ka tiraahdid sheekadda lafteeda iyo inaad si kalsooni leh aad u soo bandhigto. Tilmaamahani wuxuu salka ku hayaa casharo iyo siminaarro isdabayaal ahaa, oo uu siiyey warriyayaasha BBC, tafatirihii hore ee barnaamijka Today Mr. Kevin Marsh. Iibi fikraddaada adoo kalsooni qaba, taasoo wadata faahfaahin badan. Ayuu leeyahay Mr. Marsh. Xitaa hadii aad tahay mid inta badan keligii shaqeeya waa inaad gudbisaa fikraddaada. Laakiin fikraddo badan waxey guul dareystaan marka la gudbinayo. waxaa jira laba waxyaabood oo sal u …
Qaybtanna waxaad ku baraneysaa sida ugu wanaagsan ee ay iskula shaqeyn karaan weriyaha iyo soosaaraha. Tifaftiraha ama Soo saaraha jooga xarunta wuxuu masuul ka yahay barnaamijka oo dhan oo go’aan uu ka gaaraa – markaasi waxaa habboon in waxa uu doonayo u sharraxo weriyaha, taladiisana uu tixgeliyo. Joseph Warungu, waa tafatirihii hore ee Focus on Afrika, laanta BBC afka Ingiriiska kula hadasha qaaradda Africa. Wuxuu sharaxaad ka bixinayaa habka loo maro ama loo xusho warka, uu soo diray wariyaha jooga goobta warka laga soo tabinayo. Arrinka ugu horeeya, waa inaad salka u dhigtid, waxa ay warbixintu ku saabsan tahay, isna …
Ka feker gabdad ama loor bariis ah oo cirka loo tuuray. Si ballac ah uma soo dhacayso. Way kala firdhanaysaa. Sidaas awgeed maxaad ugu malaynaysaa in xanuunku si ballac ah u dhaco. Kansarku waa uu kala firdhaa, sida wax kasta oo kale, waxaa uu mararka qaar noqon karaa mid keena saameyn aan la koobi karin oo hal meel isugu imaanaysa mar qura. Wixii kor aada way soo dhacaan Kaamerooyinka la socda xawaaraha gawaarida waddooyinka waxaa sannadihii ugu horreeyay lagu ammaanay inay ka waxtar badnaayeen sidii la filayay. Arrintan waxaa u sabab ahaa iyadoo aan xisaabta lagu darin in hoos u …
BBC waxay sawirrada ka soo gaaraan meelo kala duwan, sidaa darteed waa muhiim in xaqiijiyo meesha sawirad ka yimaadeen. Qaybtan waxaad ku baran doontaa sida ugu wanaagsan ee qofku isaga ilaalin karo in uu daabaco sawir dood laga keeni karo iyo sharciyada la xiriira isticmaalka sawirrada carruurta. Marka aad dooranayso sawir aad ugu talogashay bogga BBC News, waxaa muhiim ah in aad ka fakarto sida aad sawirka u isticmaalayso. Ha noqdo mid ku haboon halka aad u doonayso. Sida uu yiri Phil Coomes. Is waydii: Sawirku ma mid loogu talogalay baa war mise barnaamij? Ilaa heerkee ayaa warku miisaan leeyahay? …
Marka aad Raadiye wax u qoreyso waa in aad dhageystaha soo jiidataa, oo aad isticmaasho luqad sahlan. Iska ilaali inaad isticmaasho jumlo aan micnaheeda la fahmi Karin. Waxaa kale oo muhiim ah in aad dhinacna u janjeerin. Ogowna inaad masuul ka tahay waxa aad qortay. Waxaa jira waxyaabo muhiim ah, oo aad u baahan tahay inaad tixgalisid marka aad qoreysid warka. Waa muhiim ah in aad fahansan tahay waxa aad qoreysid. Hadii soo jeediyuhu uusan fahamsanayn sheekada, sidee dhagaystuhu u fahmi karaa. Yeelo Hal-abuur Nuqulka aad qoreysid waa in uu soo jiitaa dhegeystaha. Yeelo hal-abuur, dhowr siyaabood ayaad u samayn …
Saxaafadda wax baarta waxay la tacaashaa, dhacdooyinka aan muuqan ama aan war loo hayn kuwaasi oo ay ku sameyso daraasad qoto-dheer. Waxaa la geliyaa wakhti badan iyo dadaal si xog sax ah loo uruuriyo. Nuxurka taleefishinka waa inay dadku daawadaan dhacdooyinka ay ka muuqdaan waxa dhacay, ayna cad yihiin. Saxaafadda wax baarta waxey la tacaashaa, dhacdooyinka aan muuqan ama aan war loo hayn. Qish ayay bixisaa, waxay wararka ka heshaa ilo aan la aqoon, ama kuwa wararka sirta ah faafiya (whistlblowers), dokumentiyo si hoose ay u faafiyeen dad aan rabin in la ogaado, iyo warar runtoodu aan la hubin, oo …
Qaybtan waxaad ku baraneysaa sidii aad isugu diyaarin lahayd in aad fikraddaada u dhistid sida ugu fiican ee saxda ah ah isla markaana aad uga saartid wixii walaac ah. Waxaa kaloo uu ku saabsan yahay sida aad gacan uga geysan kartid curinta bey’ad hal-abuur samaysa. Waxaad haysaa fikrad asal ah oo aad u wanaagsan… waxa keliya oo hadda aad samaysaa waxaa weeye in aad dhistid fikradda. Mowduucan, waxaa uu ku salaysan yahay khudbado isdaba joog ah iyo kulammo waxbarasho oo loo jeediyay weriyeyaasha BBC kuwaas oo uu bixiyay tifaftirihii hore ee barnaamijka Today Kevin Marsh. Waxaa taas inta badan lagu …
Inaad sameyso warbixin asal ah waxay u baahan tahay shaqo adag, waqti iyo ujeeddo. Ma ahan inta badan hawl aad maalin gudaheed ku sameyn karto ee waxay kaaga baahan tahay inaad wakhti geliso si aad u hesho sheeko cusub oo aan horey looga hadlin. Wariye kastaa, wuxuu jecel yahay in shaqadiisa ay noqoto mid uu isagu ugu horeeyo tabinteeda. Tilmaaamahan soo socda waxay ku saleysan yihiin, casharro iyo tababbarro isdaba joog ah, oo uu bixiyey Weriye ka tirsan BBC, ahaan jireyna tafatiraha barnaamijka Today Mr. Kevin Marsh. Sababta aan saxaafadda ugu biirno. Ereyga ah (Hal abuurka wariyenimo), waa mid ka …